Silicone ntekwasa akwa Suppliers na Factory - China Silicone ntekwasa akwa Manufacturers
Changzhou Jiashun New Ihe Technology Co., Ltd. guzosie ike na 2015, bụ a emeputa ọkachamara na mmepụta na ahịa nke iko eriri ngwaahịa. Ọ dị na Changzhou, isi obodo ọdịnala oge ochie nke China, na ndịda Osimiri Yangtze na ụsọ mmiri nke Taihu Lake, n'etiti etiti Osimiri Yangtze. Ọ bụ akụkụ si Shanghai na Nanjing. Ọ dị n'akụkụ okporo ụzọ awara awara nke mba 312 na okporo ụzọ awara awara, nwere njem njem dị mma.
Silicone teepu, makwaara dị ka sandwich silica gel, ka nke silica jel na iko eriri isi ákwà site elu okpomọkụ vulcanization, na acid na alkali-eguzogide, na-eyi ndị na-eguzogide, elu na ala okpomọkụ na-eguzogide na corrosion eguzogide. A na-ekekwa akwa silica gel n'ime agwakọta silica gel na gel silica gel, nke na-ekewakwa n'akụkụ abụọ otu teepu silicone na akụkụ abụọ teepu silicone.
Liquid silicone ntekwasa akwa
Silicone teepu, makwaara dị ka sandwich silica gel, ka nke silica jel na iko eriri isi ákwà site elu okpomọkụ vulcanization, na acid na alkali-eguzogide, na-eyi ndị na-eguzogide, elu na ala okpomọkụ na-eguzogide na corrosion eguzogide. A pụkwara ikewa akwa akwa silica gel gel na gel silica gel, nke nwekwara ike kewaa n'ime otu akụkụ silica gel na akwa silica gel.